धिक्कार छ छोरा नै चाहिने समाजलाई ! – Health Post Nepal
२०७९ वैशाख १३ गते १६:१५
एक ३२ वर्षकी महिला अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्थ्यो, जसको गर्भको सातौं बच्चाको एवर्सन (गर्भपतन) गरिएको थियो।
दुई छोरीपछि ५ वटा एवर्सन गरियो। दोष कसको? स्वयं श्रीमतीको, श्रीमानको या समाजको?
अहिले के छ त ती आमाको अवस्था भनेर सबैलाई लागिरहेको होला। हिजो आइसीयूमा भेन्टिलेटरमा राखिरहेको अवस्थामा उहाँको मृत्यु भयो। म आफैंले डेथ सर्टिफिकेटमा साइन गरेर दिएँ। अहिलेसम्म कति डेथ सर्टिफिकेटहरु साइन गरेर दिएँ होला। तर यति भावुक म अहिलेसम्म भएको थिइनँ। यसपालिको गर्भमा पनि छोरी नै बसिसकेपछि गत चैत २८ गते उहाँ (ती महिला) लाई बच्चा फाल्ने औषधि खुवाइएको रहेछ। त्यसपछि यो घटनाको सुरुवात भयो।
यो घटनामा अन्त्यमा के भयो त? ती जन्मिसकेका दुई छोरीले कलिलो उमेरमै आफ्नो आमा गुमाउनुप¥यो। श्रीमानको लागि छोरा होस् भनेर यतिचोटि एवर्सन गरिदिने श्रीमतीको मृत्यु भएको छ। अलिकता भए पनि ती श्रीमानको मन त पक्कै रोयो होला।
अब रह्यो परिवार र समाज। उनीहरुसँग विचरा भन्नेबाहेक अरु शब्द छ र? छोरा, छोरी एउटै हुन् माया र संस्कार दिने हो। छोराभन्दा छोरीले आमा र बुबाको सेवा गरेको समाजमा प्रष्टै देखिएको छ।
यो सामग्री बद्री पोखरेलको फेसबुकबाट लिइएका हो। यसबारे पाेखरेलले बनाएकाे भिडियाेका लागि यहाँ हेर्नुहाेला। आवरण तस्बिर-टुमरोजवर्ल्ड